Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato "buugga aqoonsiga shirkadaha" | Abuurista khadka tooska ah
El buuga aqoonsiga shirkadahaWaa dukumiinti kaas oo lagu aasaasay sharciyada isticmaalka saxda ah iyo taranka mid kasta oo ka mid ah astaamaha garaafka ee tilmaamaya shirkad.
1 Muxuu buugan muhiim ugu yahay?
2 Maxaa loogu talagalay buugga aqoonsiga shirkadeed?
3 Soo bandhigida buuga aqoonsiga shirkada
4 Gudaha gudahiisa: qaybo ka mid ah buuga aqoonsiga shirkadda
Muxuu buugan muhiim ugu yahay?
Buugga aqoonsiga shirkadda wuxuu ka kooban yahay qalab wax lagu barto, kaas oo ka kooban qaab cad, nidaamsan oo nidaamsan, macluumaadka ku saabsan fikradaha garaafka, tilmaamaha, ujeeddooyinka iyo dhammaan nidaamyada kale ee loo adeegsado soo-jeedinta muuqaalka ee noocyada kala duwan, sidoo kale, waxay ka kooban tahay qaar qodobbada loo arko inay lagama maarmaan yihiin haddii saldhigyada taariikhiga ah iyo kuwa ganacsi ee shirkadda loo qaato qaab tixraac ah.
Taasi waa sababta waa lagama maarmaan in waqti iyo dadaal la galiyo xagga baridda iyo wacdinta "injiilka" ee ahmiyadda ugu weyn, ee nooca.
Maxaa loogu talagalay buugga aqoonsiga shirkadeed?
Si la mid ah sida buugaagta loogu isticmaalo in lagu barto sida loo isticmaalo qalab ama App computer, sidoo kale waa lagama maarmaan si sax ah u isticmaal ku saabsan astaanta shirkadda waana in buuga aqoonsiga shirkaddu u oggolaado inuu noqdo mid dhab ah oo la taaban karo, waxa guud ahaan iyo keliya noqon kara arag, ur, dareen, dhadhamin ama sida garashada kama dambaysta ah ee fikradda qaarkood, waana sababta ay u leedahay muhiimaddaas oo kale.
Soo bandhigida buuga aqoonsiga shirkada
Si loo kashifo fikradda nooc ka mid ah, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo hawlgal, marka lagu daro faahfaahinta, waa inay noqotaa mid aad u sharraxsan oo aan ku koobnayn oo keliya heer garaaf, laakiin heer fikradeed, maadaama nooca buuggu uu ku lug leeyahay u samee sawirka astaanta dadwaynaha mid kasta oo ka mid ah soo bandhigitaankeeda suurtagalka ah.
Gudaha gudahiisa: qaybo ka mid ah buuga aqoonsiga shirkadda
Waxyaabaha ku jira buugan ayaa loo qaabeeyey laba qaybood oo waaweyn, kuwaas oo kala ah:
Waxyaabaha aasaasiga ah ee aqoonsiga.
Qaybta koowaad waxay ka kooban tahay oo keliya astaanta, laakiin sidoo kale iyada qorshayaasha qaabeynta, iyo sidoo kale matalaaddeeda midabbo iyo midabbo kala duwan, noocyadeeda kala duwan, ha noqdaan taban ama togan, midabbada iyo u dhigma noocyada kala duwan ee nidaamyada; marka lagu daro astaamaha ama noocyada loo adeegsado isgaarsiinta, qaababyada iyo wixii kale cunsur muuqaal ah aasaasiga ah ee u hoggaansamaya aqoonsiga shirkadda ee shirkadda / sumadda. Isticmaalidda dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxay xaqiijineysaa calaamadeynta joogtada ah, iyada oo la siinayo dadka isticmaala tilmaamo kala duwan oo caddaalad ah.
Qaybta labaad waxay ka kooban tahay dhammaanteed taxanaha side taxanaha kaas oo leh astaanta taas oo, marka lagu daro joogtaynta, aan ka samayn wax olole xayaysiis ama ficil ah, sida, tusaale ahaan, xafiisyada xafiisyada oo leh adeegsi ganacsi iyo maamul oo keliya: baqshadaha, kaararka, waraaqaha, iyo kuwa kale; iyo sidoo kale aqoonsiga iyo calaamadeynta xarumaha, walxaha / alaabada xayaysiinta, dharka shaqaalaha, dhismaha webka iyo farriimaha loogu talagalay isticmaalka gudaha oo keliya.
Shaki la’aan, qodobka labaad wuxuu noqdaa kan ugu xasaasisan kuwa la xusay, asal ahaan sababaha soo socda awgood iyo in la awoodo in la hubiyo in geeddi-socodka oo dhan uu la socdo mid kasta oo ka mid ah tilmaamaha ku habboon iyo in la hubiyo in shay walba si sax ah loo qabtay, waxaa lagama maarmaan ah in shirkadaha ay aadaan xirfadlayaashaas ku takhasusay hawsha noocan ah. Guud, naqshadeeyayaasha iyo khabiirada suuqgeynta, si wada jir ah ayey u wada shaqeeyaan si loo dejiyo istiraatiijiyadda ugu habboon, waa sababtaas sababta taageerada labadaba marka la fulinayo hawshan ay tahay mid aan cudurdaar lahayn, maaddaama aan gacan laga helin mid ka mid ah xirfadlayaalkan, buuga aqoonsiga shirkaddu wuxuu ku dambayn doonaa wax yar oo aan dhammaystirnayn.
Sidoo kale, buuga aqoonsiga shirkadaha waxay bixisaa faa'iidooyin badan, waana sababta ay muhiim ugu noqotay noocyo / shirkado badan. Marka adoo og waxkasta oo aad hada ogtahay, waxaa la joogaa waqtigii bilow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato "buugga aqoonsiga shirkadaha"